Amazon मा कसरी सफलतापूर्वक खुदरा लोकप्रिय उत्पादनहरू?
अमेजन संसारको सबैभन्दा ठूलो ई-वाणिज्य प्लेटफर्म हो जहाँ हरेक संसारका प्रयोगकर्ताहरूले हरेक संसारलाई उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्छन्। अमेजनले व्यापारीहरूलाई कसैको लागि पैसा उठाउन मद्दत पुर्याउछ। यहाँ तपाइँलाई वेबसाइट सुरू गर्न वा तपाईंको अप्टिमाइजेसनमा लगानी गर्न आवश्यक छैन। तपाइँलाई आवश्यक सबै चीजहरू तपाईंको ग्राहकहरु लाई गुणस्तर उत्पादन र उत्तम ग्राहक समर्थन प्रदान गर्न को लागी छ। तपाईलाई विचार गर्नु आवश्यक एक चीज हो तपाईंको अमेजन उत्पाद सूची अनुकूलन। अमेजनले तपाईंको सूचीमा ट्राफिकहरूको डेभ ल्याउन सक्दछ यदि यो अमेजन आवश्यकताहरूको अनुसार डिजाइन गरिएको छ र प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको खरीद निर्णय गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो अमेजन सूचीमा परिवर्तित ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँले एक आधारभूत नियमको सम्झना गर्न आवश्यक छ - तपाईले प्रदान गर्नुभएको उत्पादनहरुका बारे थप विवरण, तपाई अमेजन एसईआरमा रेट गर्नुहुनेछ। Amazon ट्राफिक केहि Google ट्राफिकमा फरक छ। अमेजनमा केहि उत्पादनहरूको खोजी गर्ने प्रयोगकर्ताहरू केहि खरिद गर्न स्पष्ट उद्देश्य छ। तिनीहरू केहि जानकारी प्राप्त गर्न उद्देश्यमा अमेजन अनुसन्धान गर्दैनन्। अमेजन उत्पाद पेजमा Amazon मा राम्रो रूपान्तरण दर व्यापक रूपमा 15% मानिन्छ। यो अन्य ईकमर्स प्लेटफर्म भन्दा तीन गुणा बढी छ। यो अमेजन खोजहरु को खरिद मानसिकता द्वारा व्याख्या गर्न सकिन्छ।
तथापि, वर्तमानमा, अमेजनमा तपाईंको व्यवसाय स्थापित गर्न पर्याप्त छैन। अधिकांश ट्राफिक बनाउनको लागी, तपाइँ निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंको उत्पादन सूची पुरा तरिकाले अनुकूलित गरीएको छ साथै तपाईंको मार्केटिंग अभियान तपाईको फायदेमा काम गर्दछ। यस लेखमा, हामी तपाईंको अमेजन सूचीमा परिवर्तनहरू अधिकतम गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्वहरू छलफल गर्नेछौं।
सूची शीर्षक शीर्षक प्राथमिक प्रयोगकर्ताहरु मध्ये एक को रूप मा छ कि प्रयोगकर्ताहरु को जज को प्रभावित गर्दछ
तपाईंको अमेजन सूचीकरण को समयमा, तपाईंलाई आफ्नो उत्पादन शीर्षक को रूप मा विशेष ध्यान दिनुहोस यो पहिलो प्रयोगकर्ता एक औसत प्रयोगकर्ता अमेजनमा उत्पादन अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्नु हुन्छ। साधारणतया बोल्नु, शीर्षकले मानिसलाई तपाईंको उत्पादन बारेमा के बारेमा बताउँछ।
यदि तपाइँले पहिले नै लोकप्रिय अमेजनका उत्पादनहरू खोज्नु भएको छ भने, तपाईंले ध्यान दिनुपर्छ कि तिनीहरूमध्ये धेरै लामो र वर्णनत्मक शीर्षकहरू छन् जुन सबै महत्त्वपूर्ण उत्पादन विशेषताहरू र विवरणहरू समावेश छन्।.तपाईंको उत्पाद र लक्षित कीवर्ड को बारे मा केहि महत्वपूर्ण जानकारी मा फेंक गर्न को लागि 250 अक्षरहरु सम्म छ। तपाईंको शीर्षकमा अवश्य आवश्यक तत्वहरू ब्रान्ड नाम, उत्पादनको नाम हो, र कुनै पनि भित्री विशेषताहरू जस्तै रंग, आकार वा प्रयोग हो।
यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँको शीर्षक खोजशब्दों संग ओवरलोड न गर्नुहोस किनकि यो पढ्न योग्य नहीं हुनेछ र स्पैम को देख्नेछ। राम्रो रूपान्तरित शीर्षकको आदर्श संस्करण पढ्न योग्य, आकर्षक, वर्णनात्मक शीर्षक हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई तपाईँको उत्पादन तुरुन्तै बताउँछ।
अमेजनमा भावनात्मक पहिचान उपकरणको रूपमा छविहरू अमेजन उत्पाद विवरणहरूको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पृष्ठ अनुकूलन छविहरू हुन्। छविहरू तपाईंको सूचीमा क्लिक गर्न सक्दछन् वा स्क्रोलिङ राख्नको लागि। धेरै प्रयोगकर्ताहरू अनलाइन खरिद गर्न डराउँछन् किनभने तिनीहरू व्यक्तिगत रूपमा उत्पादित गुणस्तरको मूल्यांकन गर्न सक्दैनन्। यद्यपि, अनलाइन सपिङ्गले प्रतिस्पर्धी मूल्य, समय-बचत, र किनमेल सुविधा जस्ता धेरै लाभहरू प्रदान गर्दछ। तपाइँका सम्भावित ग्राहकहरूलाई उत्तम खरीदारी अनुभवको साथ प्रदान गर्न, तपाइँसँग उच्च गुणस्तर र व्यावसायिक रूपमा तपाईंको उत्पादनको फोटोहरू बनाउन आवश्यक छ। तिनीहरूले विभिन्न कोणहरूबाट बेच्ने उत्पादनहरूको निरीक्षण गर्न सम्भावना पाउनुपर्छ।
Amazon ले यसको उत्पादन छवि नियमहरू पछ्याउन आवश्यक पर्दछ जुन तपाईंको छविमा मात्र तपाईंले उत्पादन गर्नु भएको छ, सेतो पृष्ठभूमिमा यसको कुनै पनि अतिरिक्त तत्वहरू बिना। मुख्य तस्विरहरूमा सामानहरू समावेश नहुनु हुँदैन जुन खरीदमा समावेश छैन जुन पनि प्रचारक नाराहरू र बैजहरू "जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनाइएको" र अन्य। यसबाहेक, अमेजनले तिनीहरूको जूम सुविधाको फाइदा उठाउन 1, 000 पिक्सेलमा छवि कम्तिमा 1, 000 पिक्सेलको छवि हो। त्यसोभए यदि यो सम्भव छ भने तपाईले थप थप रिजोल्युसन प्रयोग गरीएको दायराको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी तपाईंको अमेजन उत्पादहरू लोकप्रिय बनाउनुहुन्छ?
तपाईंको शीर्षक र तस्विरबाट बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू बुलेट प्वाइन्ट द्वारा आकर्षित गर्न सकिन्छ। अमेजनमा बुलेट प्वाइन्टहरूका लागि तपाईसँग पाँच ठाउँहरू छन् जहाँ तपाईका उत्पादनको फाइदा र विशेषताहरू प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ। तपाईंको गोलेटको प्रभावकारितालाई अधिकतम गर्न, तपाईं दुई देखि चार वाक्यको छोटो अनुच्छेद प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।.यहाँ तपाइँ कुनै पनि साधारण मुद्दाहरू ठेगाना गर्न सक्नुहुनेछ जसले कसैलाई खरिद गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईंले आफ्नो समीक्षाहरूमा केही उजुरीहरू देख्नुभयो भने, तपाईंको बुलेटहरू खातामा खातामा अद्यावधिक गर्नुहोस्। पहिलो तीन बुलेट बिन्दुहरूमा एक उच्चारण गर्नुहोस् किनभने तिनीहरू सबै प्रयोगकर्ताको ध्यान आकर्षित गर्छन् र उनीहरूको खरिद निर्णय गर्न मद्दत गर्छन्।
अर्को क्षेत्र जहाँ तपाइँ आफ्नो अमेजन उत्पाद लोकप्रियता बढाउन सक्नुहुन्छ विवरण हो। तपाईंको भुक्तानी ग्राहकमा खोजीकर्ता बदल्न तपाईंको अन्तिम मौका हो। उत्पाद वर्णन प्राय: अमेजन प्रयोगकर्ताहरूले अनदेखी गरेका छन् किनकि यसले उनीहरूको खरीद गर्न जाने उत्पादनको बारेमा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ। यसैले तपाईंलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाईंको उत्पादन विवरण पढ्नको लागि रोचक छ, वर्णनात्मक र उपयोगी। यहाँ तपाइँले विशेष शब्दहरू वा वाक्यांशहरूलाई हाइलाइट गर्न र तपाईंको व्याख्यालाई पढ्न सजिलो बनाउन आधारभूत HTML मार्कअप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अमेजनले तपाईंलाई उत्पाद विवरणमा प्रयोग गर्न 2, 000 वर्णहरूलाई दिन्छ। प्रयोगकर्तालाई तपाइँको उत्पादन खरिद गर्नको लागि सबै क्यारेक्टरहरू प्रयोग गर्नको लागि सल्लाहकार छ।
तपाईंको ग्राहक समीक्षा तपाईंको पृष्ठ पङ्क्तिमा ठूलो प्रभाव रहेको छ र तपाइँको शीर्ष मार्केट विचारहरु मध्ये एक हुनुपर्दछ। तिनीहरूले सकारात्मक रूपमा तपाईंको उत्पादन सूचीबद्ध प्लेसमेन्टलाई औसत स्टार रेटिङ मार्फत खोज परिणाममा उत्पाद परिणामहरू र उत्पादन विवरण पृष्ठको शीर्षमा देखा पर्दछ। यदि तपाईंको औसत तारा मूल्याङ्कन4भन्दा बढी छ भने, तपाइँसँग लोकप्रिय अमेजन उत्पादनहरू मध्ये एक हुनको लागि सबै मौकाहरू छन्।
सबैभन्दा लोकप्रिय समीक्षा सेक्सन अमेजन पेजको बाँया-दाँया भागमा राखिएको छ र यस क्षेत्रलाई प्रस्तुत गर्दछ जहाँ उत्पादनको लागि समीक्षा "yes" को रूपमा प्राय: उपयोगी रूपमा। तपाईं अमेजनलाई सम्झौता गर्न सक्नुहुन्न जुन यस सेक्शनमा देखाइएको समीक्षा र कुन छैन। तथापि, यस सेक्शनमा थप4र 5-तारा समीक्षाहरू देखा पर्दछ, तपाईंको रूपान्तरण दर र बिक्री उच्च हुनेछ।
अन्तिम स्थान जहाँ समीक्षाहरू एक सूचीमा प्रभाव पार्न सक्दछ "सबैभन्दा हालको ग्राहक समीक्षा" सेक्सन हो। यस खण्डले भर्खरैका हालैका समीक्षाहरू समावेश गर्दछ र कुनै पनि प्रकारका मतहरूद्वारा असर गर्न सक्दैन। यदि तपाईंको सबै भन्दा पुरानो ग्राहक समीक्षाहरू राम्रो छन् भने, अमेजन खोजीहरू प्रायः तपाइँको ब्रान्ड विश्वसनीयको रूपमा स्वीकार्नेछन् र तपाइँको ग्राहक बन्नुहुनेछ।
यही कारण हो कि अमेजनमा सफल रिटेलिङको लागि तपाईंको मौका अधिकतम गर्न; तपाईंलाई आफ्नो समीक्षाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि सहयोगी हुन प्रयास गर्नुहोस्।
- получить лицензию для криптовалюты в эстонии